Nhau - Kushandiswa kweprostate gallate
Taura nesu Nhasi!
Gallic Acid (Yegiredhi Giredhi)
Gallic Acid （Magetsi Giredhi)
Yakachena kuchena Gallic acid
Gallic Acid （Mishonga Kirasi）
Methyl Gallate (Magetsi Giredhi)
Propyl Gallate （Kudya Giredhi）
Propyl Gallate （Chikafu cheGiredhi FCC-IV）
Propyl Gallate （Pharmaceutical Giredhi)
Kushandiswa kwe proply gallate
Propyl gallate (PG), inozivikanwawo sepropyl gallate, ine molecular fomula yeC10H12O5. Iyo hama mamorekuru mashoma ndeye 212.21. Sezvo chiChinese "Maitiro eUtsanana Ekushandisa Kwekuwedzera Kwekudya" (GB2760-2011) anoti: Propyl gallate inogona kushandiswa mumafuta echikafu, chikafu chakakangwa, zvigadzirwa zvehove zvakaomeswa, mabhisikiti, ma noodles epapo nezvimwe. Mari yekushandisa iri 0.1g / kg.
Propyl gallate Chemical zvimiro Milky chena-senge makristasi kana machena kujekesa yero-shava crystalline poda, isina hwema, inorwadza zvishoma, inonyungudika 150 ℃. Iyo isina kugadzikana pakupisa, uye inobatsira kuora kana yaiswa muchiedza. Iyo yepepuru kana yakasvibira yakasvibirira kana ikaratidzwa kune mhangura uye ayoni ioni, uye iri hygroscopic. Inonyungudika nyore nyore mumvura inopisa, ethanol, propylene glycol, glycerin, mafuta ekotoni, mafuta enguruve, nzungu mafuta uye ether, asi isinganyungudike mumvura inotonhora. Iyo pH ye0,25% aqueous solution ingangoita 5.5. Makonzo ane muromo LD503800mg / kg uye ADI 0-1.4mg / kg (FAO / WHO, 1994).
Propyl gallate zvakare inosimbisa mumiririri iyo inobvumidzwa kushandiswa muChina uye inoshandiswa zvakanyanya kunze kwenyika. ChiChinese inotaura kuti inogona kushandiswawo kumafuta anodyiwa, chikafu chakakangwa, mabhisikiti, ma noodles epakarepo, mupunga wakabikwa nekukurumidza, nzungu dzemumagaba, zvigadzirwa zvehove dzakaomeswa uye zvigadzirwa zve nyama zvakarapwa, uye huwandu hwekushandisa i0g / kg. Iko kugona kwePG pane lard kwakasimba kupfuura kweBHA kana BHT. Kana ichinge yakasanganiswa neBHA kana BHT, mhedzisiro ye synergist inowedzerwa.
PG iri zvakare mumiririri wemafuta-anogadziriswa ayo anotenderwa kushandiswa kuChina uye anoshandiswa zvakanyanya kunze kwenyika. Iko kugona kwePG pane lard kwakasimba kupfuura BHA kana BHT. Kana ichinge yakasanganiswa neBHA neBHT, synergist inowedzerwa, asi mhedzisiro yezvigadzirwa zvedood haina kusimba seBHA neBHT. nyika yangu inotaura kuti inogona kushandiswa kumafuta anodyiwa, chikafu chakakangwa, mabhisikiti, ma noodles epapo, mupunga wakabikwa nekukurumidza, nzungu dzemumagaba, zvigadzirwa zvehove dzakaomeswa uye zvigadzirwa zve nyama zvakarapwa, uye mari yekushandisa iri 0.1g / kg.
Propyl gallate chikafu uye chikafu chinowedzera. Inoshandiswa sehuni mugomba wemafuta, maradhi, nezvimwewo, ine simba rakasimba, asi ine mukana wekutara. Muyero wacho uri pasi pe0.1g / kg. Kana ichishandiswa seanodyisa mumiriri, iyo * dosage iri zana ppm. Inogona zvakare kushandiswa muzvipoda. Rat remuromo LD50 iri 3.8g / kg.
Post nguva: Chivabvu-17-2021
Adress: 1666 Jianye Road, High-tech Zone, Leshan Guta, Sichuan Provinice, China
Runhare: +86 15390206217
Chivabvu-17-2021 Kushandiswa kwe proply gallate
Chivabvu-07-2021 Kuvandudza kwepamusoro-kuchena gallic acid uye mashandisiro ayo mune zvemagetsi kemisitiri
Kukadzi-23-2021 Gallic Acid Kugadzirira